Motorola, Huawei iyo LG ma cusboonaysiin doonaan noocyada kala duwan ee saacadaha casriga ah ee sanadkan | Wararka IPhone
Motorola, Huawei iyo LG ma cusboonaysiin doonaan noocyada kala duwan ee saacadaha casriga ah sanadkan
Waxbaa ku dhacaya Android Wear iyo soosaaraasheeda. Waxaa la ogyahay in xaddidaadaha ay Google dejisay furitaanka Android Wear, oo aan u oggolaanayn lakabyada qaabeynta qalabka ay soo saareen, waligood ma aysan jeclaan soo saarayaasha, laakiin adeegsadayaasha isticmaali kara smartwatches iyaga la'aantood. Dhibaatooyin nacasnimo leh oo had iyo jeer la yimaada lakabyo u gaar ah soosaarayaasha. Intaa waxaa dheer, xulashooyinka xaddidan ee Android Wear waxay siisaa soo-saareyaasha ayaa ku qasbaya shirkadaha qaar, sida Samsung, inay ku soo bandhigaan qalabkooda nidaamkooda hawlgalka ee Tizen, oo bixiya waxqabad wanaagsan iyo isticmaalka batteriga oo hooseeya, iyo codsiyada la heli karo ayaa bilaabaya inaysan dhibaato noqon.
Sannadkan kaliya Asus iyo Fosil waxay halis geliyeen inay cusboonaysiiyaan xarumahooda kala duwan ee ay hadda siiyaan dadka isticmaala. Si kastaba ha noqotee, inta kale ee soo saarayaasha waaweyn: LG, Motorola iyo Huawei ayaa xaqiijiyay in aysan ka shaqeyneyn qalab cusub si ay u bilaabaan sannadkan, war soo jiita dareenka iyadoo tixgelinaysa in ficil ahaan sannad kasta ay cusbooneysiinayaan qalabkooda.
Qayb ka mid ah dhibaatada ayaa ku jirta Android Wear, laakiin maahan sababta kaliya. Waxay u muuqataa in suuqa ay ka muuqato calaamado daal, tan iyo qalab noocan ah Wali si dhib yar ayey horey ugu socotaa waxayna na siisaa ficil ahaan waxqabadyo la mid ah noocyadii ugu horreeyay ee suuqa ku dhacay. Tani waa halka Google, ka warqabto dhibaatooyinkaas, waxay umuuqataa in lagu qasbay kaliya inaysan bilaabin qalabkeeda kala duwan ee moobiilka ah, oo ay soo bandhigi doonto 4-ta Oktoobar, laakiin sidoo kale waxay madaxiisa si buuxda u gelin kartaa adduunka saacadaha.
Apple waxay hadda bilowday jiilka labaad ee Apple Watch sanad iyo badh ka dib soo bandhigidiisa, iyo taas kaliya lagu daray dareeraha GPS iyo caabbinta biyaha. Way cadahay in qaybtani ay si tartiib tartiib ah u kobcayaan oo gaabiskani uu saameyn ku yeelanayo iibinta qalabka noocan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Motorola, Huawei iyo LG ma cusboonaysiin doonaan noocyada kala duwan ee saacadaha casriga ah sanadkan
AG Drive - waa mid ka mid ah cayaaraha ugu wanaagsan ee tartanka sida barnaamijka usbuuca
Fintonic, abka kuu ogolaanaya inaad koontooyinkaaga xakameyso waa la cusbooneysiiyay